ဆံနွယ်တွေဘယ်လောက်ပျက်စီးပျက်စီး တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမယ့် Morrocanoil Set!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆံနွယ်တွေဘယ်လောက်ပျက်စီးပျက်စီး တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမယ့် Morrocanoil Set!!!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဆံပင်ပြုပြင်ရတာကြိုက်လွန်းလို့ ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားပိုင်ရှင်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Morrocanoil Set လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Set လေးမှာ Treatment Oil, Shampoo နဲ့ Conditioner ဆိုပြီး သုံးမျိုးပါပါမယ်။ ဒီ Product ကို Israel မှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ အရေအသွေးအားဖြင့် အံ့မခန်းပါပဲနော်။ နိုင်ငံတကာကို တင်သွင်းရောင်းချနေပြီး အမြဲတမ်းလိုလို ပစ္စည်းပြတ်သည်အထိ လူကြိုက်များတာကြောင့် အရေအသွေးပိုင်းအားဖြင့် လုံးဝစိတ်ချရပါတယ်နော်။
2016 ကတည်းက ဆုတံဆိပ်တွေရရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Product ဟာ ဆံသားဖွာခြင်း၊ နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း နဲ့ ဆံသားအလွန်ကျွတ် တတ်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီ အဆီ ကို ခေါင်းလျှော်ပြီး မခြောက်ခင်အချိန်မျိုးမှာ လိမ်းပေးရပါမယ်။ ဆံပင် ရေခြောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဆီလိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းနဲ့ ပုံသွင်းရလွယ်ကူပြီး ပုံကျတဲ့ ဆံသားကိုရရှိစေမှာပါ။ ဆံသားတွေ ပြန်လည်အားပြည့်လာစေဖို့အတွက် Argan Oil – Vitamin E, Fatty Acid တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဆံသားကို ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း နဲ့ Linseed Extract – မှာ ဆံသာကျန်းမာစေဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့ Linolenic Acid တို့ပါဝင်တာကြောင့် ဆံသားကို ပြန်လည် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေမှာပါ။ အနံ့အားဖြင့်လည်း သင်းသင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် သုံးစွဲသူတိုင်းနှစ်သက်ကြမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ 100 ml ကို 62,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဆံသားနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ Shampoo နဲ့ Conditioner ကိုရရှိဖို့အတွက် Hydrating Shampoo & Conditioner ( ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီး ရေဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ရရှိစေရန် ), Moisture Repair Shampoo & Conditioner ( အပူ, Chemical များကြောင့် ပျက်စီးသွားသောဆံသား ကုသရန် ), Extra Volume Shampoo & Conditioner ( ပါးလွှာပြီး ဆံပင်အကျွတ်များသူများ ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာစေရန် ), Smoothing Shampoo & Conditioner ( ကြမ်းတမ်းပြီး ဖွာသောဆံသားများ ကုသရန် ), Clarifying Shampoo & Conditioner ( ခြောက်သွေ့ပြီး ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်သူများ ကုသရန် ) ဆိုပြီး ငါးမျိုးငါးစားထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆံသားလိုအပ်ချက်ကို တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်ပြီး ကုသနိုင်တာပေါ့။ ဒီ Product တွေမှာ ဆံသားကို ပျက်စီးစေနိုင်မယ့် Sulfate, Phosphate နဲ့ Paraben တို့မပါဝင်တာကြောင့် ဦးရေပြားပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဆံနွယ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတောက်ပြောင်တဲ့ ဆံသားကို အသုံးပြုပြီးချိန်မှာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် Shampoo & Conditioner Set 70ml ကို 14,000 ကျပ် နဲ့ Aura-Australian Products online shop မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းခြောက်မှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့အောင်ကူညီပေးမယ့် Peri Pera ရဲ့ Butter Pang!
Tags: Conditionertreatment oilခေါင်းလျှော်ရည် / Shampoo